I-Geology ye-Valley of Fire State Park, iNevada
Valley of Fire State Park, eNevada. Ifoto (c) u-Andrew Alden, onikwe ilayisenisi kwi-About.com (inqubomgomo yokusetyenziswa ngokufanelekileyo)
I-Valley of State State Fire isekhilomitha ezingama-58 kumntla-mpuma we Las Vegas, Nevada, kufuphi nomda we-Arizona. Ipaki iquka iihektare ezingama-40,000 kwaye yaqanjwa ngokuba yinto ebomvu yetsholongwane enomtsalane ebomvu ebudeni be-dinosaurs.
Ezi zifundo zavezwa apho iindawo ezindala zakwa-Cambrian ubudala (malunga neminyaka eyi-500 yezigidi ubudala ubudala) zinyanzeliswe kwicala elingaphambili kwiindawo ezincinci (iJurassic, malunga neminyaka eyi-160 yezigidi ubudala) ye-Sandwich Sandstone. Isitye esasisiseko sasibekwa kwiindawo ezinqabileyo, ezihlala ixesha elide elincinci njengeSahara namhlanje. Ngaphambi kokuba indawo ibe yintlango eyomileyo, yayinxwemeni lolwandle. Umbala obomvu uvela kubuninzi be-oxides ensimbi kwisanti.
Ukongeza kwimbali yesigodi se-geological, unokufumana ubungqina bendawo yokuhlala nabantu. Abantu base-Anasazi badala i-petroglyphs okanye i-rock art, enokuthi ibonakale namhlanje.
Kumnyango wepaki, iikhilomitha zamaritone ezigreyini zinika indlela yokubonakalisa ngokugqithiseleyo kweritye elibomvu. Ipaki yanikezwa igama layo ngumhambi ngexesha lama-1920 afikelele kwisayithi ekushoneni kwelanga. Umbono, wathi, wayebukeka nje ukuba amatye ayekwa umlilo! Amehlo alambele kulo mbala emva kokuhamba kwenkangala ende kwaye kufuneka imangaliswe emva kwemvula ethile, wagqiba.
Amaqhezu adala aseBunanza King Formation enza iintaba ezinqabileyo kulo moya omile; apha kunye naso sandstone ebomvu iphuma phantsi kwe talus yabo.
Amatye alubomvu e-Aztec Sandstone athabatha imilo ekhangayo, eneengcango phantsi kweendawo ezikhuselekileyo zentlango yeNevada. Bakha inxweme yaselwandle yasendulo.
Endleleni eya kwiMidumba yaseMhlophe ngasentla ekupheleni kweNtlambo yoMlilo iParitz Park, iindawo ezisezantsi zamehlo ziboniswe kakuhle emva kweemithi zamatye ezinika ipaki igama layo.
Le yembono ngaphantsi kweTanki yeMouse, i-hollow-eveziweyo e-Petroglyph Canyon egcina amanzi ehlobo elomileyo. Khangela umbono we stereo we-gorge.
Amaqhina kule ngxondorha yamatye awayiyo iifossi kodwa iziqhelo zenziwe ngokugqithisa ngokucokisekileyo kwi-chemistry.
Iplani yokulala yaseSandstone
Ilitye liye lahlulwa phakathi komnye wezohlulo zalo. Iimilo zingabonakalisa iimpawu zangaphambili kwi-Jurassic desert setting, okanye amanqaku amancinci.
Xa umgangatho wesitye unqabile ukusuka kumaminerali angaphantsi komhlaba, ukuguguleka komhlaba kungasebenza phantsi kwesi sikhopho ukudala iinqaba zobukhulu bonke.
Imigodi emininzi ebizwa ngokuba yi- tafoni kucatshangelwa ukuba ifake njengama-salts ekhiqiza kwaye ikhuphe iinqwelo ze-sandstone.
Iingubo zamaminerali ezibizwa ngokuthi i-varnish entlango zikhawuleza zichithwe ngamatye angqaliweyo ngaphandle kweendawo ezikhuselekileyo. Abantu abahlala kwintlango yokuqala bavula imifanekiso kwi-varnish, ngaloo ndlela beshiya irekhodi yemisebenzi yabo yemihla ngemihla.
Izizwe ze-Anasazi kunye nePaiute ezihlala kule ndawo zenza imifanekiso kwi-patina emnyama, okanye i-varnish, igubungela ilitye lenkangala. Ezi zi-petroglyphs zibonisa imifanekiso ukusuka kwimpilo yemihla ngemihla edlulileyo. I-Atlatl Rock, enye yee-rock rock formations, yaqanjwa ngokuba yi-petroglyphs yezixhobo zokuphonsa umkhonto ezisetyenziselwa abantu abahlala kwintlango.
I-California Geology Destinations
Fumana i-Geology yePlateau yaseTibetan
Amanqaku amaninzi kunye neeNgcebiso zeChi Square Distribution